Agromart | Agricultural Marketplace Nepal जिरा खेती प्रविधि – Agromart
जिरा खेती प्रविधि
जिरा खेती प्रविधि (Cumin Cultivation Technique)
जिरा एक मसला वाली हो । यस्को उत्पत्ति मिश्र ( इजिष्ट) मा भएको मानिन्छ । उत्पादन गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरुमा भारत,इरान, इराक,साउदी अरव मिश्र चीन आदि पर्छन नेपालमा यसको खेति नगण्य रुपमा गरिदै आएको छ । नेपालमा जिरा आयात गर्ने पव्रमुख देश भारत हो ,बर्षको २० अर्ब भन्दा बदी जीरा आयत हुन्छ। यसको विकासका लागि नेपालमा राष्ट्रिय मसला वाली विकास कार्य समितिले काम गर्दै आएको छ । भारत बाट वीउ ल्याई विभिन्न फर्म÷केन्द्रहरुमा परिक्षण प्रशारण गर्दैआईरहेको छ।
जिराको उपयोग सम्पूर्ण समुदाय वर्ग र भौगोलिक क्षेत्र वासिन्दाहरुमा रही आएको छ। जुनसुकै तरकारी माछा , मासु, अचार, केक आदिमा प्रयोग गरिन्छ । यो रक्त वर्धक हुन्छ । यस्को खाने कुरालाई स्वादिष्ट मात्र होईन रुची समेत बढाउछ । जिरालाई औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । घा“टी दुखेको स्वाद दवेको रुघाखोकिमा कलेजो र आन्द्रा सुनिएमा मेख भित्र दाना निस्केमा यस्को प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको छ।जिरा एक वर््िषय झाडिदार मसला वाली हो यस्को वानस्पतिक नाम क्यूमिन साईमिनम (cuminum cyminum) हो र यो Apiacae÷umbellifarae परिवारमा पर्दछ । यसवाट पाईन वासना युक्त तेललाई क्यूमिनोल वा क्यूमिक अल्डीहाईड भनिन्छ ।
हावापानी र माटो ः
जग्गा तयारी ः
दुईतीन पटक खनजोत गरी डल्ला फुटाएर माटो बुरबुरउदो पार्नुपर्छ । पहिलेका वालीका ठुटाहरु जलाएर नष्ट गर्नु पर्छ । माटोलाई राम्ररी सम्याएर स साना व्याड तयार गर्नुपर्छ जसबाट पानी पटाउन र गोडमेल गर्न सजिलो हुन्छ । माटोको पी .इच.मान ६–७ जस्मा येथेष्ट मात्रामा हावा तथा पानीको स१चार हुन्छ । त्यही माटोमा सफलताका साथ खेती गर्न सकिन्छ । मल खादको व्यवस्था ः कम्पोष्ट अथवा गोठेमल ४०–५० डोको डी.ए.पी. १.५ के.जी प्रति रोपनि माटोमा मिसाउने । युरीया १.५ के.जी. जग्गा तयार गर्दा १.५ के.जि. जिरा छरेको एक महिना पछी टपड्रस गर्नुपर्छ । तोरीको पिना अण्डीरको पीना, कुखुराको मल जीरा खेतीमा प्रयोग गर्दा उत्पादनमा
वृद्धि ल्याई वइलाउने रोग लाग्न कम गर्छ ।
वाली कटाई तथा उत्पादन ः
रोग तथा कीराहरु ः
पनि यस वालीमा हानी पु¥याउछ ।
लाही किरा ः– लाही जीराको मुख्य सत्रु हो यस्ले कलिला भागको रल चुसेर उत्पादन घटाउछ । लाही नियन्त्रणको लागि ०.०३ प्रतिशत डाइमियोएट वा ०.२५ प्रतिशत मिचाचाईल डिमेटोन वा ०.०१ मोनो क्रोटोफस किटनाषक विषादी सिफरीस गरीएको छ ।
पात खाने लाभ्रे :
पटेल र साथीहरु (Patel etal) कुनै पनि मसला वाली जस्तै ज्वानो, धनिय ,जिरा मेथी आदिपूर्ण रुपमा
नेमाटोडको , असर रहित हुदैनन भन्ने निष्कर्ष गरेका छन तर सौफमा नेमाटोड लाग्दैन ।
खरोन रोग :
यस रोगको लक्षण पात र डाठमा सेतो धुलो देखा पर्छ । यस गोगको प्रकोप जीरा खेतिमा फूल फूल्ने
समय देखि फल पाक्ने समय सम्म पनि लाग्न सक्छ । खासगरी फूलखेल्ने र गेडा लाग्नेद समयमा
अत्यधिक मात्रामा देखा पर्छ । न्यानो र आद्र मौषममा बढि लाग्छ । फूल खेल्ने अगावै यो रोग लागेमा
जीराको गेडा लाग्दैन भने फल लागेको अवस्थामा जीराका वोटमा यस रोगले आक्रमण गरेमा जीराको
गेडा सानो हुन्छ र चाउरी पर्छ ।
यसरोगको नियन्त्रणका लागि लक्षण देखिनो साथ क्याराथियन २०–२५ ग्राम प्रति लिटर पानिमा मिसाएर
छर्नुपर्छ । आवश्यक परेमा १०–१५ दिन पछि दोस्रो पटक छर्नु पर्छ । अथवा १ एम.एल. क्याराथियन
प्रति लिटर पानीमा स्प्रे गर्ने ।
वोट वइलाउने रोग ः(Cumin Wilt)
यो जिरा वालीको सवै भन्दा डरलाग्दो रोग हो । यस रोलाई जिरा वालीको अवरोधको रुपामा चिनिन्छ ।
यो रोग पौषको पहिलो हप्तामा उम्रिएको ४–५ हप्ता पुगेको वालीमा देखा पर्दछ । यो रोग पौषको
अन्तिम तिर वढि समस्या देखाउछ । यस रोगबाट प्रभावित विरुवाहरुको पात वटारिन्छ । पछि गएर
सम्पूर्ण वोट मर्छ । कलिलो वोटमा वढि आक्रमण गर्छ । यो रोगको लागि रसायनिक नियन्त्रण छैन ।
वाली चक्रअपनाउने र निमको पानीको प्रयोग बाट रोग सर्नबाट रोक्छ । रोग नलागेको जग्गाको विउ
मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ । यस रोगको प्रभावकारी नियगन्त्रणको लागि रोग अवरोधक जात लगाउन
सिफारीस गरेको छ। महता र साथिहरुले (१९९०) अनुसार कीटनासक औषधि र नेमाटोड नाषक
औषधि कार्वोयुरान, फोरेटे र टेमिक आदिले माटो उपचार गरेमा रोग कम गर्छ ।
डढवा रोग :
रोग लागेको विरुवामा खैरो थोप्लाहरु देखा पर्छ जुन पछिगएर कालो बन्छ । प्राय रोगी वोटमा दाना
लाग्दैन । दाना लागे पनी चाउरीएको हलुका र कालो रंगको लाग्छ । यो रोग नियन्त्रणको लागि ०.०२
प्रतिशत डाइथेन एम ४५ रोपेको ४० दिन पछि १० दिनको फरकमा छर्ने सिफारिस गरीएको छ ।
विषादिको राम्रो प्रभावकारीताको लागि प्रति लिटर पानी्मा १ एम.एल सावुनको धmोल मिसाउन
सिफारिस गरिएको छ । वढि सिचाई आवश्यक पर्ने वाली र तोरी वाली जिरा खेतको नजिक लगाउन
हुदैन । वोभिष्टीन ले वीउ उपचार गरी रोप्दा रोग कम लाग्दछ । व्रोडिक्स मिक्चर वा डाइचेन ….४५
वा डाईथेन जेड ७८ ले विरुवा र हप्ताको भए पछि १५।१५ दिनको फरकमा फरकमा छर्नाले यो रोग
नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यो रोग कम गर्न र उत्पादन बढाउन टपसिन एम. ९त्यउकष्ल ःष्० ०.२
प्रतिशत र ०.३ प्रतिशतको (Topsin Mi) ले विरुवामा स्प्रेगर्नु सिफारिस गरिएको छ ।
वीऊको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् :